Home / Forex Offers / Fampahafantarana Forex Offers / Free VPS
Amin'ny FXCC dia manolotra ny mpanjifanay ny fahafaha-manao sy ny toerana hivarotana amin'ny alàlan'ny serivisy servisy VPS (virtoaly tsy miankina). Misy telo tombontsoa tena lehibe amin'ny fampiasana VPS ny fampiroboroboana ny varotra; haingana, fiarovana ary fahafahana miditra. Ity misy horonantsary fohy momba ny tsirairay.
Ny FXCC dia manome ny VPS fampiantranoana ho fomba mahazatra sy azo ampiasaina amin'ny fomba hafa mahatsara ny faharetan'ny fifandraisana izay tena akaiky ny haingana indrindra ho an'ny fampiharana ara-barotra. Mamela ny fahateren'ny ambany sy manome antoka tanteraka ny fampifandraisana haingana kokoa: ny mpampindram-bola, ny sehatra lehibe sy ny tambajotra ara-bola toy ny ECNs an'ny FXCC, dia mitarika ny famonoana varotra maromaro.
Na raharaham-barotra amin'ny (MetaTrader), na fampiasana maimaim-poana sy fanampiana maimaim-poana, ny fiarovana dia lafiny manan-danja amin'ny varotra fampiharana VPS. Misy ny fandrosoana sy ny fanatsarana azo avy amin'ny famoahana rindrambaiko rindrambaiko any amin'ny rafi-pandaminana manokana ary ny Windows Server Server VPS dia mivoatra hatrany mba hiarovana ireo serveurs sy ireo mpampiasa avy amin'ny mpamandrihana sy ireo fandrahonana hafa. Raha mikasika fifehezana ara-batana, dia fikarakarana lehibe ny fisorohana ny tsy fahombiazana. Ny servers sy ny seraseran'ny seraseram-pifandraisana matanjaky dia manara-maso ny 24 / 7 amin'ny resaka ary dia mitantana ny 24 / 7 miaraka amin'ny ekipa mpanohana ara-teknika.
Ny fananana mpanjifanao manokana ho an'ny fampiharana ny fampiharana ara-barotra, dia manampy amin'ny fiantohana ny fihenan'ny varotra anao. Raha toa, ohatra, ny tranonkala fifaneraserana ao an-tranonao, dia tsy hampiantrano azy ianao ao amin'ny solosaina ao an-tokantranonao, na dia haingana aza izany ary na dia haingana aza ny fifandraisanao amin'ny fifandraisana amin'ny fiber optic. Ianao dia hampiantrano azy amin'ny servisy iray voatokana, izay ahafahan'ny mpanjifanao mandamina ny vokatrao haingana araka izay azo atao, araka izay azo atao, ary afaka miditra amin'ny tsenanareo ora efatra isan'andro. Tsy hampihemotra ny tsenanareo rehefa manidy ny ordinateranao sy ny haitao ianao mandritra ny alina. Izany toe-javatra mitovitovy amin'ny fidirana amin'ny fivarotana; Raha toa ka mihazakazaka programa automated izy ireo dia tsy maintsy mivarotra 24-7, ny mpizara dia mila manatsara hatrany ary manokan-tena amin'ny serivisy manokana, varotra.
Ny fitaovana sy ny protocols dia amboamboarina ho an'ny tolotra VPS amin'ny ankapobeny, toy ny fidirana Remote Desktop izay ahafahan'ny mpampiasa mampifandray mora foana amin'ny serfa mpizara - VPS na aiza na aiza, tsy misy fananganana fanampiny na configuration ilaina. Ny mpivarotra dia afaka miditra amin'ny sehatra varotra avy amin'ny fitaovana samihafa: PC, ordinatera, takelaka, ary smartphones, tsy manelingelina ny rindrambaiko mihodina amin'ny VPS. Amin'ny fampiasana VPS maro samihafa sy kaonty maro dia afaka apetraka amin'io VPS io ihany, manolotra ny fidirana amin'ny mpampiasa, mba ahafahan'ny mpampiasa marika mijery ny birao amin'ny fotoana mitovy, dia afaka alosehina, avy amin'ny toerana samihafa.
Mba hampihatra ny VPS maimaim-poana, midira tsotra fotsiny ao amin'ny Traders Hub, vakio ny Terms & Conditions ary manaova fangatahana.